-Esi mee ka biodiesel. Ngwurugwu biofuel nke aka anyị | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Mee biodiesel nke anyi site na mmanu ohuru ma obu nke ejiri ọ ga-ekwe omume ọ bụ ezie na o nwere nsogbu ụfọdụ.
Ke ibuotikọ emi m ga-agwa gị otú ike biodiesel na mgbakwunye na nsogbu ndị ahụ kwuru, ma ihe mbụ na-eme bụ ịmata ihe anyị na-aga ime.
Biodiesel na-bụ mmiri mmiri biofuel nwetara site na mmanụ ihe oriri Raped, sunflower na soybean bụ ndị a na-ejikarị eme ihe, ọ bụ ezie na a na-amụkwa ihe ha nwetara na algae.
Njirimara nke biodiesel dị nnọọ ka nke mmanụ dizel na-arụ ọrụ na njupụta na ọnụọgụ nke cetane, ọ bụ ezie na o nwere ebe dị elu karịa mmanụ dizel, njirimara nke na-eme ka o kwe omume ịgwakọta ya na nke ikpeazụ maka mmanụ.
American Society maka Ule na Standardkpụrụ Ihe (ASTM, njikọ mba na otu maka ụkpụrụ dị mma) na-akọwa biodiesel dị ka:
"Monoalkyl esters nke ogologo yinye ọdụdụ asịd ewepụtara nke mmeghari lipids dị ka akwukwo nri mmanụ ma ọ bụ anụmanụ abụba, na-eji na mkpakọ mgbanye engines"
Kaosinadị, ndị esters ndị a na-ejikarị bụ methanol na ethanol (nke enwetara site na transesterification nke ụdị ụdị mmanụ nri ma ọ bụ abụba anụmanụ ma ọ bụ site na esterification nke abụba abụba) n'ihi ụgwọ dị ala ya na uru kemịkal na nke anụ ahụ.
Ihe dị iche na mmanụ ndị ọzọ bụ na biofuels ma ọ bụ biofuels na-eweta ihe dị mkpa nke iji ngwaahịa akwụkwọ nri dị ka akụrụngwa, n'ihi nke a, ọ dị oke mkpa iburu n'uche njirimara nke ahịa ugbo.
Ya mere, ọ ga-ahụ kwuru na mmepe nke ụlọ ọrụ biofuel Ọ dabere na ọkachasị nke nnweta akụrụngwa dị na mpaghara, kama na ịdị adị nke mkpa zuru ezu.
Site n'ịhụ ịdị adị nke ina maka biofuels, mmepe nke ahịa gị nwere ike iji kwalite atumatu ndị ọzọ dị ka ọrụ ugbo, ịkwado ọrụ ọrụ na ngalaba isi, ndozi ndị bi na ime obodo, mmepe ụlọ ọrụ na ọrụ ugbo, ma n'otu oge belata mmetụta nke ọzara site na ịgha mkpụrụ nke ike ọkụ.
Ngwa ngwa ngwa ọkụ
ASTM na-egosiputa ule di iche iche nke agha aghaghi ime iji mezuo oru ha n'ihi na iji biodiesel dika mmanu ugbo ala, a ghaghi itinye ihe ndi ozo nke yiri nke dizel na-achota. .
1 Uru na ọghọm nke biodiesel
2 Otu anyi g’eme k’onwe anyi
2.2 Ngwa ndị dị mkpa
2.3 Akụrụngwa na arịa (ihe niile ga-adị ọcha ma kpọọ nkụ)
3 Nchedo, dị ezigbo mkpa
4 Nwere ike ịmepụta biodiesel n'ụlọ ọ bụla?
5 Biodiesel arụrụ n'ụlọ na Spain
Uru na ọghọm nke biodiesel
Otu uru kacha mkpa anyị nwere ike ịchọta site n'iji mmanụ a na-arụ mmanụ kama mmanụ diesel bụ Ichekwa ihe ndi ozo nke becausewa n'ihi na ọ bụ isi iyi nke ume ọhụrụ.
Uru ọzọ bụ mbupụ nke biofuelsỌ bụrụ na ha emee na Spain, n'ụzọ dị otú a, ike ịdabere na mmanụ ọkụ, nke bụ 80%, belatara.
N'otu aka ahụ, ọ na-amasị mmepe na mmezi nke ndị bi n’ime ime obodo nke raara nye mmeputa nke biofuel a.
N'aka nke ọzọ, ọ na-enyere ya aka mbelata nke ikuku CO2 na ikuku, na-ewepụ nsogbu nke mmiri ozuzo acid ebe ọ bụ na ha enweghị sọlfọ.
N'ịbụ ngwaahịa na-emebi emebi na nke na-anaghị egbu egbu, ọ na-ebelata mmetọ ala na ihe ize ndụ nke nsí na nsị ọ bụla na-akpata.
Na-enye aka nchekwa dị ukwuu ebe ọ bụ na o nwere ọmarịcha mmanu na ebe ọkụ dị elu.
Banyere ndọghachi azụ, anyị nwere ike ịgụta ọtụtụ dị ka ụgwọ. Ugbu a, ọ bụghị asọmpi na mmanụ dizel.
Banyere oru Njirimara, nwere obere calorific uru, ọ bụ ezie na ọ pụtaghị ọnwụ nke ike ma ọ bụ mmụba dị ukwuu na oriri.
Ọzọkwa, o nwere ala kwụsie ike kwụsie ike, nke a dị mkpa ma a bịa na nchekwa, ma ọ nwere njirimara oyi ka njọ, nke na-eme ka ọ ghara ikwekọ na oke okpomọkụ. Agbanyeghị, akụrụngwa abụọ ikpeazụ a nwere ike mezie site na itinye mgbakwunye.
Otu anyi g’eme k’onwe anyi
Nweta biodiesel anyị ọ dị oke egwu maka ngwaahịa kemịkalụ anyị ga-eji mee ihe n'ihi nke a, m ga-ekwupụta usoro ndị dị n'elu ka ị wee ghara iche na ị ga-eme ya n'ụlọ belụsọ ma inwee usoro nchekwa niile na mgbakwunye ịbụ nye iwu na Spain, ebe ọ bụ na iwu akwadoghị imepụta biofuel a.
Nke mbụ bụ ịmalite iji mmanụ mmanụ ọhụrụ lụọ ebe ọ bụ na nke a dị mfe karịa mmanụ ejiri, ọ bụ ezie na anyị bu n’obi inye mmanụ ikpeazụ a nke abụọ. Mgbe ị nwere ike ịchịkwa mmanụ ọhụrụ ị nwere ike ịga na mmanụ ejiri na ihe ị ga-achọ ugbu a bụ igwe agwakọta, buru n'uche na ị nweghị ike iji ya maka ihe ọ bụla ọzọ ka igwekota ahụ wee bụrụ otu n'ime ndị ochie ma ọ bụ nke dị ọnụ ala.
Dị ka anyị kwurula na mbụ, a na-enweta biodiesel site na abụba nke akwụkwọ nri, nke sitere na echiche kemịkal mara dị ka triglycerides
Mkpụrụ ndụ triglyceride mejupụtara nke mkpụrụ ndụ fatty acid 3 jikọtara ya na ngwongwo glycerin.
Ihe a chọrọ (akpọrọ transesterification) n'ihi na e guzobere anyị biofuel bụ ikewapụ ndị a ọdụdụ asịd si glycerin na-enyere anyị aka na a catalyst, ọ nwere ike ịbụ NaOH ma ọ bụ KOH, ma si otú nwee ike dịrị n'otu ma dịrị n'otu onye ọ bụla n'ime ha molekul nke methanol ma ọ bụ ethanol.
Ngwa ndị dị mkpa
Otu n’ime ngwaahịa ndị anyị ga-eji bụ mmanya. Nke a nwere ike ịbụ methanol (nke na-etolite methyl esters) ma ọ bụ ethanol (nke na-etolite etyl esters).
N'ebe a, nsogbu mbụ na-ebilite ebe ọ bụrụ na ịhọrọ ịme biodiesel dị ka methanol, m ga-agwa gị na ị nweghị ike ịme ụlọ a ebe ọ bụ na ihe dịnụ sitere na gas.
Agbanyeghị, enwere ike mepụta ethanol n'ụlọ ma ihe dịnụ sitere na osisi (ihe fọdụrụ na mmanụ).
Ihe na-adịghị mma bụ na na -eme biodiesel na ethanol siri ike karịa karịa methanolbụ n'ezie abụghị maka beginners.
Ma methanol na ethanol ha na-egbu egbu nke ị ga-eburu n'uche nchekwa mgbe niile.
Ha bụ kemịkal na-egbu egbu nke nwere ike kpuo ìsì ma ọ bụ gbuo gị, na dịka ị drinkingụ ya, ọ na-emerụ ahụ site na ịmịkọrọ ya na akpụkpọ gị ma na-eku ume na alụlụ ya.
N'ihi na n'ụlọ ule i nwere ike iji Anụ Mmịkpọ mmanụ nke nwere methanol ọ bụ ezie na ị ga-eburu n'uche na ogo nke ịdị ọcha ga-abụ ma ọ dịkarịa ala 99% ma ọ bụrụ na o nwere ihe ọzọ ọ gaghị eme ihe ọ bụla dịka ethanol denatured.
Na mmegharịDịka anyị kwuru, ha nwere ike ịbụ KOH ma ọ bụ NaOH, potassium hydroxide na soda caustic n'otu n'otu, otu dị mfe ịchọta karịa nke ọzọ.
Dị ka methanol na ethanol, a pụrụ ịzụta soda n'ụzọ dị mfe mana ọ na-esiri ya ike ijikwa ya karịa potassium hydroxide, nke a na-atụ aro maka ndị mbido.
Ha abụọ bụ hygroscopic, nke pụtara na ha na-amịrị mmiri ikuku site na ikuku, na-ebelata ikike ha nwere iji kpalite mmeghachi omume ahụ. A ga-edebe ha mgbe niile na akpati.
Usoro a bụ otu ihe ahụ na KOH dịka nke NaOH, mana ọnụọgụ ga-adị 1,4 ugboro karịa (1,4025).
Inggwakọta methanol na potassium hydroxide Nleta nke sodium methoxide nke na-emebi emebi ma dị mkpa maka mmepụta nke biodiesel.
Maka methoxide, jiri ihe eji HDPE (polyethylene dị elu), iko, igwe anaghị agba nchara, ma ọ bụ enameled.
Akụrụngwa na arịa (ihe niile ga-adị ọcha ma kpọọ nkụ)
Otu lita nke ọhụrụ, mmanụ a uncụghị mmanụ.
200 ml nke 99% methanol dị ọcha
Mkpali, nke nwere ike ịbụ potassium hydroxide (KOH) ma ọ bụ sodium hydroxide (NaOH).
Itule na 0,1 gr nke mkpebi (nke ka mma na mkpebi nke 0,01 gr)
Atụ gilaasi nke methanol na mmanụ.
Translucent ọcha HDPE ọkara liter akpa na ịghasa okpu.
Ọfụfụ abụọ dabara na ọnụ nke akpa HDPE, otu maka methanol na otu maka mmegharị.
Mpepe lita PET nke nwere lita abụọ (mmiri nkịtị ma ọ bụ karama soda) maka sedimentation.
Mpekere lita abụọ nke PET maka ịsacha.
Nchedo, dị ezigbo mkpa
Maka nke a, anyị ga-eburu n'uche ọtụtụ nchekwa yana nchekwa ihe dịka:
Uwe na-eguzogide ọgwụ na ngwaahịa ndị anyị ga-edozi, ndị a ga-adị ogologo ka ha wee kpuchie aka uwe ma si otú a na-echebe ogwe aka zuru oke.
Uwe mkpuchi akwa na iko nchedo iji kpuchie aru dum.
Na-agba mmiri mgbe niile nso mgbe ị na-ejikwa ngwaahịa ndị a.
Ebe ọrụ ga-adị mma nke ọma.
Eku ume gas. Maka nke a enwere ihe nkpuchi pụrụ iche.
Enweghị ndị na-enweghị usoro ahụ, ụmụaka, ma ọ bụ anụ ụlọ enwere ike ịnọ nso.
Nwere ike ịmepụta biodiesel n'ụlọ ọ bụla?
Agbakwunye a bit nke a egwuregwu na nke ukwuu akpọrọ ihe na usoro "La que se avecina" akọwa nnọọ mfe na nkebi ahịrịokwu "waving nke bụ gerund" ma n'ezie na ọ bụghị mgbe nile, e wezụga ịbụ ukwuu ize ndụ, na na i nwere naanị hụrụ isi, ihe.
Na-enweghị inye ọtụtụ nkọwa zuru ezu, m nwere ike obi sie gị ike na a ka nwere ụzọ dị anya iji mee biodiesel ebe ọ bụ na nke mbụ eji mmanu mmanu (nke bụ ihe masịrị anyị), mgbe ahụ, anyị ga-etolite sodium methoxide, mepụta mmeghachi omume dị mkpa, mee mbufe na nkewa.
Anyị ga-enyochakwa ngwaahịa nke ngwaahịa a mere na ịsa ahụ na n'ikpeazụ ihicha.
Biodiesel arụrụ n'ụlọ na Spain
N’agbanyeghi uru biodiesel nwere ike iweta, n’ime Spain ugbu a bụ iwu na-akwadoghị ịme ya n'ụlọ.
Mba ụfọdụ na-ekwe ka imepụta biofuel a ma na-erekwa ngwa nrụpụta ka onye ọ bụla nke nwere nchekwa nchebe kwesịrị ịmepụta ya.
Onwe ya, nke a bụ ihe abụọ maka mmebe iwu nke biodiesel arụrụ n'ụlọ.
Nke mbụ bụ na Spain na-eche banyere anyị na Ha amachibidoro imepụta ya n'ihi nsogbu ahụ na nke a gụnyere mgbe ị na-ejikwa kemịkal dị egwu.
Nke abụọ bụ na Spain enweghị mmasị n'eziokwu ahụ bụ na nwa amaala ọ bụla nwere ike imepụta ihe ọkụkụ maka ya Mmasị akụ na ụba.
N'ọnọdụ ọ bụla, obi abụọ adịghị ya na ọ na-anọchi anya breeki maka mgbanwe ike ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ihe ọkụkụ » biodiesel » -Esi mee ka arụrụ n'ụlọ biodiesel
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara igwe ikuku